Xildhibaan ka hadashay ujeedka ka dambeeya dib u dhaca Doorashada Koofur Galbeed? – XOGMAAL.COM
Guddiga doorashada Koofur Galbeed ayaa shalay markii saddexaad dib u dhigay doorashada iyaga oo ku dooday in aysan heysan agab doorasho oo ku filan iyo wakiillada Beesha Caalamka oo aan ku iman karin waqtiga ka harsan doorashada.
By Soomaaliya	 Last updated Dec 2, 2018
Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade oo ka mid ah xildhibaanada Golaha shacabka Soomaaliya ayaa xukuumadda Soomaaliya ku eedeysay in ay ujeeddooyin ka leedahay dib u dhigidda doorashada Koofur Galbeed.
Xildhibaannadda ayaa sheegtay in kor joogtada ka socota Beesha Caalamka aysan ka qeybgeli Karin doorashada dhaceysa 19ka Bishan,sabababtana waxaa ay ku sheegtay in ay reer Galbeedka aadayaan fasaxa ciidooda Christmas-ka.
Xaniifa waxaa ay sheegtay in amaanka Magaalada Baydhaba qal qal lageliyay, sidoo kalena doorashadii Shariif Xasan ay ka qeybgaleen wax ku dhow toban kun oo Ergo.
Waxaa ay su’aal gelisay Ciidamada dowladda Federaalka ah ay ku daabuleyso Magaalada Baydhaba ee Xarunta Gobolka Baay.
Sawirro:- Dowladda hoose iyo Soomaalida Ohio oo si dhaw u wada shaqeynaya